Soo dejisan Zortam Mp3 Media Studio 27.20 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahinta,Ciyaartoyda warbaahintaZortam Mp3 Media Studio
Bogga rasmiga ah: Zortam Mp3 Media Studio
Zortam Mp3 Media Studio – waa software si loo maareeyo taxane faylasha Mp3. Software-ka wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo kuu ogolaanaya inaad maareysid bogag-yada, udheeraha qoraalka, ku dar daboolka iyo qoraallada faylasha codka, raadi nuqullo faylasha Mp3 ah, caadi ahaan habka socodka, iwm. Zortam Mp3 Media Studio waxay la timaadaa Mp3 player iyo moduleka si aad si toos ah u soo koobto daboolka ama lyrics, haddii ay lagama maarmaan tahay. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku soo ururiso waraaqaha maktabadda warfaafinta ee farshaxanka, magaca, nooca ama shuruudaha kale iyadoo la raacayo doorashooyinka isticmaalaha. Zortam Mp3 Media Studio waxay taageertaa falanqaynta qaybaha ee tags iyo qoraalka tooska ah ee ururinta maqalka. Sidoo kale Zortam Mp3 Media Studio waxay u rogi kartaa CD-yada Mp3 files, iyo faylasha Mp3-ga oo loo diro qaabab kale oo maqal ah.
Mp3 maamulaha iyo qabanqaabiyaha
Qaybinta qaybaha kala duwan
Raadi mp3 faylasha koobi
Soo dejinta heesaha heesaha iyo daboolo xogta software
Isbedelka Mp3-ga ee WAV
Soo dejisan Zortam Mp3 Media Studio
Faallo ku saabsan Zortam Mp3 Media Studio
Zortam Mp3 Media Studio Xirfadaha la xiriira